Shaqaale diyaaradeed oo haweenay hawada kaga umuliyay | Entertainment and News Site
Home » News » Shaqaale diyaaradeed oo haweenay hawada kaga umuliyay
daajis.com:- Shaqaalaha shirkadda diyaaaradaha ee Turkish Airlines oo u dabaaldagaya gabadha yar ee ku dhalatay meel dhulka ka saraysa 12,800 oo mitir.
Shaqaalaha diyaarad ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee Turkish Airlines ayay diyaaradoodii cagadhigatay iyaga oo uu ku weheliyo qof dheeri ah, ka dib markii ay haweenay dhashay gabadh iyadoo diyaaraddu dhulka ka sarayso 12,800 oo mitir.
Rakaabka ayaa sidoo kale gacan ka gaystay dhalmada oo timid wax yar uun ka dib markii ay diyaaraddu duushay.
Digaaradda ayaa safarka ka billawday caasimadda dalka Guinea ee iyadoo ku sii jeeda magaalada Istanbul, balse sii maraysay magaalada Ouagadougou ee dalka Burkina Faso.
Hooyada iyo gabadheeda yar ayaa loo sii qaaday Isbitaal sidaadii ay diyaaraddu u cagadhigatay caasimadda Burkina Faso.
Xaaladooda caafimaad in ay wanaagsantahay ayaana la sheegay.
Shaqaalaha diyaaradda ayaa dareemay in Nafi Diaby oo lahayd uur 28 todobaad ah in ay fooli hayso, sida lagu sheegay war qoraal ah oo ay soo saartay shirkadda diyaaradaha ee Turkish Airlines.
"Si degdeg ah ayayna dhalmada uga caawiyeen iyadoo diyaaraddu hawada ku jirto."
Inta badan diyaaraduhu hooyooyinka uurka leh way u ogolaadaan in ay diyaaradaha raacaan ilaa iyo inta ay ka gaarayaan todobaadka 36 ee uurka, laakiin wixii todobaadka 28 ka dambeeya waxaa looga baahan yahay in ay keensadaan waraaq cadaynaysa maalinka la qiyaasayo in ay dhasho oo dakhtar soo sixiixay.